Shina CPLA Fivarotan-tsakafo vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy miaraka amin'ny fantsom-baravarankely aorin'ny Afa-barotra fampirantiana | Gianty
Ity vokatra ity dia nofonina manokana miaraka amin'ny boaty pirinty vita pirinty miaraka amin'ny varavarankely See-through. Namboarina ho sakafo matevina sy mahamay hatramin'ny 85 ℃ izy io. Ny vokarintsika dia nandalo ny BRC, BPI, FDA ary EU. samy hafa ny lokony sy ny lokony. Ny tranofiara dia ampiasaina betsaka amin'ny trano fisakafoanana, fety, mariazy, fitsangatsanganana, fivarotana, tsena super ary faritra hafa sakafo.
Upscale amin'ny kitapom-batana nentim-paharazana azo ampiasaina, miaraka amin'ny rotra CPLA Cutlery. Ity elanelana ity dia malefaka, maharitra, matanjaka ary tsara kokoa eo amin'ny tanana raha ampitahaina amin'ny fanamboarana plastika mahazatra azo ampiasaina. Raha tsy nampiasa izany ianao alohan'ny hahatokisanao azy, dia ho toy izany koa ny mpanjifanao. Ny fiakarana amin'ny antsy, ny fantsom-bary ary ny katsaka dia mety ho tonga karama kely fotsiny - fa ny mpanjifanao dia hahafaly ny sakafony azo antoka amin'ny fahalalana fa manamaivana ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana izy ireo. (Ny Cutlery tsirairay dia voatsindrina mazava tsara Compostable)
Ny fonosanay tsy mety amin'ny fanontana. Ny boaty anatiny sy ny baoritra mandatsa-dranomaso roa dia azo atao pirinty avy amina baiko 50 000 mahery. Azontsika atao ihany koa ny mamorona ny boaty araka ny filanao. Azonao atao ny misafidy amin'ireo singa amin'ny tsenanay ary mamaritra ny zavatra irinao tianao. Raha mila fanazavana fanampiny, dia afaka mandefa ny fanontanianao amin'ny info@ecogianty.com.
• Maharitra sy azo tanterahina tanteraka ao amin'ny trano ara-barotra
• Taratasy fanamboarana azo antoka izay mety amin'ny fanodinana ny fako
• Faly sy milay ary marefo ary azo ampiharina
• tsara amin'ny sakafo mafana na mangatsiaka
• Mety amin'ny hetsika na fivoriambe ivelany
• Fanaterana fivarotana varotra amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
Item CPLA Varotra koba Boaty misy boaty fantsom-pahalalana
Content Boaty / boaty 24pcs 7 santimetatra
Ny haben'ny boaty varotra 18 * 11.8 * 2.9cm
Asehoy ny haben'ny baomba mandatsa-dranomaso 25.5 * 12 * 19cm
Isan'ny carton Boaty 9
Haben'ny baoritra 25.5 * 12 * 19cm
Previous: CPLA Kitapom-bidy vita amin'ny plastika tsy misy vita amin'ny plastika - kitapo azo antoka
Manaraka: Famoronana Bildika Famboran'ny Boky Faha-jaza marefo mahafinaritra sy mahafinaritra
Kombo-miendrika koba vita amin'ny kapoaka
Combo Set Cutlery